Nafana ny toe-draharaha tao Toamasina : mitaky ny hamoahana ireo namany ny mpianatra | NewsMada
Nafana ny toe-draharaha tao Toamasina : mitaky ny hamoahana ireo namany ny mpianatra
Tsy tanteraka omaly, ka nahemotra anio indray ny fanolorana ireo mpianatra efatra, voarohirohy ho nanao fanimban-javatra, nandritra ny fihetsiketsehan’ny mpianatr’i Barikadimy, afakomaly, teny amin’ny fitsarana. Nafana ny toe-draharaha. Henjana ny fifandaharana teo amin’ny prefet, ny OMC, ny solotenan’ny mpianatra.
Omaly no tokony ho natolotra ny fampanoavana ny mpianatra efatra amin’ireo 24 nosamborin’ny Emmo/Reg, ny alahady sy alatsinainy teo, tany amin’ny oniversite Barikadimy. Tsy tanteraka hatramin’ny omaly hariva izany fa nahemotra, anio, ary voalaza fa miaraka amin’ny ray aman-dreniny ireo mpianatra efatra ireo.
Raha ny omaly, tonga maro vao maraina teny amin’ny lapan’ny Fitsarana Toamasina ny mpianatry ny oniversite. Voalaza fa manodidina ny 300 eo izy ireo ny nirohotra teny an-toerana nitaky ny amoahana ny namany. Tsy nipoitra teny mihitsy, izany hoe, tsy nentin’ny mpitandro filaminana teny amin’ny fitsarana ireo mpianatra.
Efa ny hariva vao ny nisy ny fihaonana teo amin’ny solontenan’ny mpianatra sy ny OMC ka tapaka tamin’izany fa izao ahemotra izao ny fanolorana ny fampanoavana azy efa-dahy.
Ireo mpianatra ireo izay voampanga ho nitarika korontana sy nitarika mpianatra ho an’ny fanimban-javatra.
Ny alahady alina teo no nivoaka teo amin’ny vavahadin’ny oniversite Barikadimy ireo mpianatra ary nandoro kodiarana sady nibahana ny arabe. Nisy ny tora-bato tamin’izany, ka fiara telo ny voalaza fa simba. Niditra an-tsehatra ny Emmo/Reg taorian’izay ka mpianatra 19 voasambotra ny alahady alina. Ny telo tamin’ireo, voalaza fa notazonina. Nitohy ny ampitso alatsinainy ny fisamborana ka tafakatra 24 ny voasambotra. Niampy iray tamin’ireo notanana ireo ireto saika natolotra ny fampanoavana tsy tanteraka ireto.
Tsy hanaiky ny mpianatra
Na eo aza ity fanemorana androany ny fanolorana ny fampanoavana ity, mitaky ny hamotsorana ny namany ireo mpianatra. Milaza ny ho tonga maro eny an-toerana hatrany izy ireo. Ity raharaha ity izay vokatry ny fahatapahan-jiro lavareny sy miverimberina ao amin’ny fonenan’ny mpianatra ka nitarika ny hetsik’izy ireo. Tranga efa miseho lava eny amin’ny fonenan’ny mpianatra na eny Ankatso na eny Vontovorona. Tsy misy vahaolana maharitra atolotry ny fanjakana ho an’ireo mpianatra ireo. Tsy mahagaga raha amin’ny hetsika toy izao hatrany ny miseho ny fitakiana kanefa miafara amin’ny fanimban-javatra sy fiakarana fitsarana, izay mety hitarika amin’ny raharaha hafa. Andrasana ny fivoaran’ny raharaha.